Canon Powershot G7 X Mark III (Silver)-26 ~ ICT.com.mm
HomeCanon Powershot G7 X Mark III (Silver)-26
လတ်တလောအခြေအနေတွင် နေ့စဥ်ငွေစျေးနှုန်းအပြောင်းအလဲရှိပါသဖြင့် ရောင်းစျေးအနည်းငယ်အပြောင်းအလဲရှိနိုင်ပါသည်။ Type: Digital camera with built-in flash, 4.2x Optical, 4x Digital and 17x Combined Zoom with Optical Image Stabilizer Total Pixels: Approx. 20.9 megapixels Effective Pixels: Approx. 20.1 megapixels Focal... [Learn more]
Brand: CanonFilter by: DSLR Cameras, MGR, USD
Playback Time: Approx.5hrs
Weight: Approx. 10.7 oz. / 304g (including battery and memory card)
Canon Powershot G7 X Mark III ကတော့ professional photographers တွေအတွက် တကယ့်ကိုအသုံး ဝင်စေမယ့် ကင်မရာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကင်မရာမှာ Digic 8 image processor ကိုအသုံးပြုပေးထားတာ ကြောင့် အရည်အသွေးမြင့်ပုံရိပ်တွေကို တိကျမြန်ဆန်စွာရရှိနိုင်မှာဖြစ်သလို ISO setting ကိုအမြင့်ဆုံးထား၍ ဓာတ်ပုံများရိုက်ကူးရာမှာလည်း အဆင်ပြေကောင်းမွန်နေတာကို တွေ့မြင့်ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံနဲ့ ဗီဒီယိုတွေ ရိုက်ကူးရာမှာ Noise ဖြစ်စေမှုကိုလည်း များစွာလျော့ချပေးနိုင်ပါတယ်။ 24-100 mm (F1.8-2.8) 4.2X Optical Zoom Lens ကိုအသုံးပြုပေးထားပြီး Optical Image Stabilizer ပါရှိတာကြောင့် ဓာတ်ပုံ၊ဗီဒီယိုရိုက် ကူးသူများအတွက် အရမ်းကိုအဆင်ပြေစေပါလိမ့်မယ်။ မျက်နှာတွေ၊မျက်လုံးတွေကို ချက်ချင်း Focus လုပ်နိုင် တာမို့ Portrait တွေ၊လှုပ်ရှားမှုမြန်ဆန်တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ရိုက်ကူးရာမှာကြည်လင်ပြတ်သားကောင်းမွန်နေတာကို မြင်တွေ့ရမှာဖြစ်ပြီး အလင်းရောင်အားနည်းတဲ့အခြေအနေမှာတောင် ပုံရိပ်တွေက တောက်ပကြည်လင်နေတာ ကို မြင်တွေ့ခံစားရမှာပါ။ Effective pixels ကတော့ 20.1 megapixels ရှိပြီး Optical Zoom (4.2)ဆ နဲ့ Digital Zoom (4) ဆအထိ ဆွဲယူရိုက်ကူးနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဓာတ်ပုံတွေကို အကောင်းဆုံးရိုက်ကူးနိုင်တဲ့ ကင်မရာတစ်လုံးဖြစ်သလို 4K ဗီဒီယိုတွေနဲ့ Full HD ဗီဒီယိုတွေကိုလည်း ကောင်း မွန်စွာရိုက်ကူးနိုင်မှာပါ။ သာမန်ဗီဒီယိုတွေသာမက အရမ်းကိုလှပတဲ့ Time-lapse ဗီဒီယိုတွေ၊ Slow motion ဗီဒီယိုတွေကိုပါ ဖန်တီးနိုင်ပါလိမ့်မယ်။ Microphone input ပါရှိတာကြောင့် အသံတွေကိုပါအကောင်းဆုံးဖမ်းယူ နိုင်မှာဖြစ်ပြီး HDMI output ပါရှိတဲ့အတွက် ရိုက်ကူးနေစဉ်အတွင်းမှာတင် Monitor နဲ့ချိတ်ဆက်၍ ရိုက်ယူထား တဲ့ပုံရိပ်တွေကို ကြည့်ရှုလို့ရမှာဖြစ်ပါတယ်။ Built-in Bluetooth လုပ်ဆောင်ချက်ပါရှိတာကြောင့် ဓာတ်ပုံနဲ့ဗီဒီ ယိုတွေကို Bluetooth လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် အလွယ်တကူ Sharing ပြုလုပ်လို့ရပါတယ်။ ဒါ့အပြင် Cannon Camera App ကိုအသုံးပြု၍လည်း Wifi လုပ်ဆောင်ချက်ဖြင့် Smartphone တွေနဲ့ တွဲဖက်အသုံးပြုနိုင်မှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီ ကင်မရာမှာအသုံးပြုနိုင်တဲ့ Card အမျိုးအစားတွေက SD,SDHC,SDXC နဲ့ UHS-l Memory Card တို့ဖြစ်ပါတယ်။ အလေးချိန်ကလည်း (304) ဂရမ်သာရှိတာကြောင့် ပေါ့ပါးမှုရှိတဲ့ကင်မရာတစ်လုံးလို့ ဆိုနိုင်ပါတယ်။ ဒီကင်မရာက ဓာတ်ပုံသမားတွေ၊ Travel Bloggers တွေ၊ Vloggers တွေနဲ့ Content Creaters သမားတွေအတွက် အသုံးတည့်စေမယ့် ကင်မရာတစ်လုံးဖြစ်ပါတယ်။
Additional features with updated firmware
The latest firmware offersanew automatic movie mode that’s ideal for vlogging, with fine-tuned auto focus and auto exposure. Zebra display and video aspect markers, plusalevel display visible in face tracking mode, are also new and ideal for advanced control.